नेपालीलाई मेरो सन्देश : आलोचनात्मक सोच्नुस् जिम्मेवार व्यवहार गर्नुस् – श्वेतपत्र
दक्षिण अफ्रिकी लेखक तथा पूर्वसांसद एन्ड्र्यु फेनिस्टाइनको ‘द स्याडो वल्र्ड’ पुस्तक पढ्दै जाँदा उनको लेखनले मलाई निकै छोयो । अचानक लाग्यो, यस्ता लेखकसँग सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्ने हो । त्यसपछि केही दिन सामाजिक सञ्जालमा उनको खोजी मेरो दिनचर्या बन्न पुग्यो । प्रयासले सार्थकता पायो, उनीसँग मेरो संवाद चल्न थाल्यो । उनको पुस्तकको पछाडि ‘बल्र्ब’मा हाम्रो समयका विश्वमै प्रतिष्ठित र हस्तक्षेपकारी हस्ती नोम चोम्स्कीले लेखेका थिए ।
यसका दुइटा कारण छन् । पहिलो, यो देश विश्वका यावत् घटनामा देखिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कर्ता हो । वास्तवमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा शक्तिशाली देश हो अमेरिका । दोस्रो, यो मेरो देश हो र यसले जुन घटनामा हात हाल्छ, त्यसले मलगायत अन्य नागरिक त्यसको भागेदार मात्रै हुँदैनौँ कि त्यो कार्यलाई हामीले प्रभावित पनि पार्न सक्छौँ । यसमा अन्य देशलाई हेरेर हामी झनै स्पष्ट हुन सक्छौँ । हामी चिनियाँ बागीहरूले आफ्नो सरकारको विरोध गर्दा सम्मान गर्छौं तर उनीहरूले अमेरिकाको बारेमा के भन्लान् भन्ने विषयमा खासै महत्व दिँदैनौँ । समाज जति स्वतन्त्र हुन्छ, नागरिकको राज्यप्रति त्यति नै जिम्मेवारी बढेर जान्छ, र त्यसलाई असर पार्ने क्षमता पनि ।
वास्तविक वाक्य यस्तो रहेछ ‘नुरेम्वर्ग ट्रायल’को सिद्धान्तअनुसार ‘युद्धपछिका सबै अमेरिकी राष्ट्रपति झुन्डिएको हुनुपर्ने हो ।’ यो भनाइलाई २१औँ शताब्दीमा अमेरिकी आतंकसँग जोडेर
कसरी हेर्नुहुन्छ ?
न त मैले न त गुरिनले नै ‘पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाएको’ भनेका छौँ । त्यसका केही सकारात्मक उपलब्धि पनि थिए । यसमा दिग्भ्रमित नभई सरल उत्तर दिन सकिँदैन । यो ठूलो प्रश्न हो ।यो अक्टोबर महिना अर्थात् ‘क्युवन मिसाइल क्राइसिस’को महिना ।
हरेक बहसमा ‘खु्रस्चेबले महादेशीय मिसाइल क्युवामा पठाउँदा कसरी संसार आणविक युद्धको संघारमा थियो’ भन्ने कोणबाट गरिन्छ । तर, कसैले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनडीले क्युवाली संकटको ६ महिनाअघि बेइजिङलाई लक्षित गरेर ओकिनावामा मिसाइल पठाएको कुरा गर्दैनन् । के विश्व त्यतिवेला आणविक युद्धको संघारमा थिएन ? यसले त के प्रस्ट हुन्छ भने यो विचार निर्माणका लागि पश्चिमाले बनाएको भाष्य मात्रै थियो ।
२२ माघ २०७६, बुधबार २२:३० मा प्रकाशित